Gossip News | News Filmy | Page 5
आर्यन र सुर्दशनको देखावटी अंगालो !
September 7, 2014 5:13 am
NFDC फिल्म अवार्डमा पुग्दा समय र परिस्थिती नै त्यस्तो बन्यो जव आर्यन सिग्देल र सुर्दशन थापा संगै बस्नु पर्‍यो । कुनै समयका राम – लक्ष्मण जस्ता यी निर्देशक र हिरोको सम्बन्ध यसरी बिग्रिएको छ कि तपाई अनुमान लगाउन पनि सक्नु हुन्न । आफ्नो साथीभाईहरु मध्येको सवै भन्दा नजिकको मित्र र फिल्म क्षेत्रबाट पनि सवै भन्दा नजिकको ब्यक्ति सुर्दशन थापा भन्दै हिड्ने आर्यनको सम्बन्ध जव सुर्दशनसंग चिसियो तव यी दुवैले एक अर्कालाई स्वार्थी भन्न थाले ।
Oops : सुष्माको अनुहार जति राम्रो खुट्टा हेर्नुस् त्यतिकै नराम्रो
August 28, 2014 2:53 am
हट हिरोइन सुष्मा कार्कीको अनुहार जति राम्रो छ हामीले उनको खुट्टा त्यतिकै नराम्रो रहेको तस्बिर कैद गरेका छौ । बर्दियाकी सुष्माले सानोमा धान रोप्ने हुँदा खुट्टाको नङ बिगारेको बुझिएको छ । हालै आयोजित एक कार्यक्रममा सेक्सी बनेर आएकी सुष्माको खुट्टाका फोटो कैद गर्ने क्रममा उनी बारम्बार तर्किएकि थिइन् ।
नम्रता श्रेष्ठ क्याविनमा !
यहि शुक्रवार देखि नम्रता श्रेष्ठको फिल्म ताण्डव प्रदर्शनमा आउँदै छ । ताण्डवमा उनले करिअरको एउटा भिन्नै अनुभव पनि बटुलिन् । बेलायती निर्देशक मुरे केरका साथ क्याविन रेष्टुरेन्टमा पुगेर उनले कलगर्लको दिन चर्या बुझेकी थिईन् ।
अरव पति प्रोड्यूसरसंग झरना बज्राचार्यको अफएयर
हिरोइन झरना बज्राचार्य विगत दुई बर्षदेखि नयाँ अफएयरमा छिन् । उनी भारतीय मुलका मलेसियन नागरिक राहुल अग्रवालसंग प्रेममा रहेकी हुन । राहुल सेफ ल्याण्डिङ फिल्मका सह लागानीकर्ता पनि हुन । अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली बसन्त भण्डारीसंग मिलेर राहुलले बनाएको सेफल्याण्डिङ फिल्म खेल्ने क्रममा झरना र राहुल नजिकिएका थिए । नेपाल रहदा उनीहरुको डेटिङ स्पट भ्यालि बाहिर धेरै पटक हुने गरेको सुत्रले खबर दिएको छ ।
तीज गीतमा दुई हिरोइनको आँखा तानातान
July 31, 2014 5:49 pm
गसिप सप्लायर्सहरुको शब्दलाई यहाँ लेख्ने हो भने सुमिना घिमिरे र गरिमा पन्तको सम्बन्ध खास राम्रो छैन् । तर मिडियाका सामुन्ने आफूहरुमा त्यस्तो केही नरहेको तर्क उनीहरुले गर्ने गरेका छन् ।
OMG: बुढेसकालमा राजेन्द्र खड्गीले यो के गरे ?
मानिसको सौख पनि अचम्मको हुन्छ । र यस्तै अचम्मको सौखका साथ फाईट मास्टर राजेन्द्र खड्गी एउटा न्यूड फोटोमा देखिएका छन् । हाल गृहनगर हेटौडामा १३ रोपनी जग्गा किनेर ग्रीन फार्म हाउस सञ्चालनमा ल्याउन तीब्र खटिरहेका ५४ बर्षे खड्गीले खोलाको किनारमा आफ्नै न्यूड सिन कैद गरेका हुन ।
पार्टीमा यस्तो पनि भयो
July 10, 2014 5:09 am
सर्वप्रथम हिरो कर्मसंगै रिसेप्सन पार्टीमा आएकी नम्रताले नव विवाहित जोडी अनुप बराल र दिया मास्केलाई भेटेपछि अन्य साथी भाईलाई हाई हेल्लो गरिरहेकी थिईन् । भिड मध्ये एक छेउबाट निर्माता माधव वाग्लेले नम्रतालाई जव देखे तव उनले एक हातले तानेर हग गर्न खोज्दा नम्रताले माधवको आग्रहलाई ठाडै बहिस्कार गरेको दृश्य देखियो । त्यतिकैमा माधव वाग्ले लाजले हो वा रिसाएर नम्रताको छेउबाट अलग्गिए ।
अनुप बरालको रिसेप्सनमा नम्रता र कर्मको यो कस्तो स्टाईल ?
प्रेम घलेसंग सम्बन्ध टुटेपछि यो समय नम्रताको श्रेष्ठको सवैभन्दा मिल्ने पुरुष साथी कर्म बनेका छन् । फिल्म क्षेत्रमा आयोजना हुने पार्टीमा यी दुई संगै पुग्छन् अनि संगै फर्किन्छन् पनि । विशेष गरी प्रेम घलेसंगको माया प्रेम टुटेपछि कर्म र नम्रतालाई केही पार्टीहरुमा संगसंगै देखिन थालिएको हो ।
खै के भन्ने रिसेप्सन पार्टीमा खाली हात पुग्छन् सेलिब्रेटी
July 8, 2014 7:41 am
कोहिनूर जोडीको रिसेप्सन पार्टीमा केही चलेका स्टारहरु भने खाली हात पुगेको दृश्य न्यूज फिल्मीले देख्यो । हुन त मन देखिको आर्शिवादनै करोडौ पर्ने उपहार भन्दा ठूला हुन्छन् तर सो बिजको क्षेत्रमा रहेका कारण समाज अनुसार चल्नुलाई नै सफल मानिस भनिन्छ । पत्नी रमिला सहित रिसेप्सन पार्टीमा हरिबंश पुग्दा उनको हातमा न त बुके थियो न कुनै खादा वा कुनै उपहार । सिधै हरिबंश स्टेजमा चढे हात मिलाए अनि आर्शिवाद दिए
कहाँ हराए रोज राणा /समयले साथ नदिदा भए शक्ति हिन
July 1, 2014 8:49 am
आफैले निर्देशन गर्ने उद्घोषका साथ ‘ग्याङस्टार’ बनाउछु भने त्यो पनि बनेन त्यसपछि हिरोइन टाईटलमा फिल्म बनाउछु भनेर दिनेश डिसीलाई निर्देशक लिएको खबर पनि सार्वजनिक गरे जसले पूर्णता पाउनै सकेन । यति मात्र हैन काँग्रेसबाट संविधानसभा सदस्य हुने तीब्र लविङ गर्दा पनि भाग्यले साथ दिएन रोज राणालाई । समयले साथ नदिएपछि निर्माता रोज राणा शक्ति हिन जस्तै बनेका छन् । फिल्म नगरीमा कुनै समय निकै बोलबाला रहने राणा आजकाल गुप्त बास सरह छन् ।